Funda Isinyathelo Sokuhweba Ngezinyathelo Ngezinyathelo, Ukuhweba nge-Forex Wabasaqalayo Isiqondisi 2020
izihloko ezisekelwe ngaphambili
Imfundo - Imibhalo nezifundo - izihloko ezisekelwe ngaphambili - Funda Forex Ukuhweba igxathu negxathu
Ngabe isebenza kanjani i-forex? Izidingo eziyisisekelo zokuhweba kwe-Forex Izinyathelo ekuhwebeni kwe-Forex
Ukukhetha umdayisi olungile
Funda imigomo ebalulekile
Vula i-akhawunti yedemo
Khetha isoftware yokuhweba
Zama amanye amasu okuhweba
Ama-Forex Ukubuzwa Kwemibuzo Isiphetho
Phakathi kwamathuluzi amaningi okutshala imali, ukuhweba nge-Forex kuyindlela ekhangayo yokwandisa imali yakho kahle. Ngokwenhlolovo ka-2019 Triennial Central Bank eyenziwe yi-Bank for International Settlement (BIS), izibalo zikhombisile ukuthi Ukuhweba ezimakethe ze-FX kwafinyelela ku- $ 6.6 trillion ngosuku ngo-Ephreli 2019, kuye phezulu kusuka ku- $ 5.1 trillion eminyakeni emithathu edlule.
Kodwa konke lokhu kusebenza kanjani, futhi ungafunda kanjani i-forex ngesinyathelo?
Kulesi siqondisi, sizokuxazulula yonke imibuzo yakho mayelana ne-forex. Ngakho-ke, ake siqale.
Ngabe isebenza kanjani i-forex?
Ukuhweba nge-Forex akwenzeki ekushintshisaneni okufana nezimpahla namasheya, kunalokho kuyimakethe ethengisa ngaphezulu lapho amaqembu amabili ethengisa ngqo ngomthengisi. Imakethe ye-forex isebenza ngamanethiwekhi amabhanga. Izikhungo ezine zokuqala zokuhweba ze-forex yiNew York, London, Sydney neTokyo. Ungahweba amahora angama-24 ngosuku kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. Kunezinhlobo ezintathu zezimakethe ze-forex ezibandakanya imakethe ye-spot forex, ikusasa lemakethe ye-forex kanye nemakethe ye-phambili ye-forex.
Iningi labathengisi abacabanga ngamanani e-forex ngeke bahlele ukuthatha ukulethwa kwemali uqobo; esikhundleni salokho benza ukuqagela kwesilinganiso sokushintshana ukuze basebenzise inzuzo yokuhamba kwentengo emakethe.
Abathengisi be-Forex bavame ukuqagela ngamanani akhuphukayo noma awayo entengo yemali ukuthola inzuzo.Ngokwesibonelo, amanani wokushintshaniswa kwe-EUR / USD abonisa inani lesilinganiso phakathi kwe-Euro neDola laseMelika. Kuvela ebuhlotsheni obuphakathi kokuphakelwa kanye nesidingo.
Izidingo eziyisisekelo zokuhweba kwe forex
Usufeze izisekelo ezibaluleke kakhulu zokubamba iqhaza ekuhwebeni kwe-Forex uma une-computer kanye ne-inthanethi.
Manje njengoba usunolwazi oludingekayo lwemakethe ye-Forex ake siqhubekele phambili nokuthi ungafunda kanjani ukuhweba nge-Forex ngesinyathelo ngesinyathelo.
Izinyathelo ekuhwebeni kwe forex
Ngaphambi kokuqala ukuhweba kwangempela, kunezinto ezimbalwa okudingeka uzicabangele kuqala. Lezi zinyathelo ziyingxenye yenqubo yakho yokufunda.
1. Ukukhetha umdayisi olungile
Ukukhetha i broker kwesokudla isinyathelo esibaluleke kakhulu sokuhweba kwe-forex njengoba ungeke ukwazi ukuhweba nge-inthanethi ngaphandle komthengisi futhi ukukhetha umthengisi ongalungile kungagcina kukuhlangenwe nakho okubi kakhulu emsebenzini wakho wokuhweba.
Kufanele uqiniseke ukuthi umthengisi unikela ngemali eshibhile, i-interface enhle kakhulu yomsebenzisi, futhi ngaphezu kwakho konke, a i-akhawunti yedemo.
Nge i-akhawunti yedemo, ungathola ukuthi broker ukufanele noma cha. Iphinde ikuvumela ukuthi uhlole futhi uhlanze amasu akho e-forex.
Uma umuntu efuna ukukunikeza okuthile noma afise ukukuhlinzeka ngezimo ezifanele, kufanele usole. Uyelulekwa kahle ukuba uphendukele kwelinye lamapulatifomu asungulwe alawulwa yiziphathimandla zamazwe abo.
2. Funda imigomo ebalulekile
Kufanele ufunde imigomo ethile yokuhweba ngaphambi kokuqala uhambo lwakho. Nayi imishwana okufanele uzame ukuyiqonda.
- Isilinganiso sokushintsha imali
Izinga libonisa inani lamanje lobhangqa lwemali.
- Inani lentengo
Yintengo lapho i-FXCC (noma elinye iqembu eliphikisayo) inikezela ukuthenga i-pair currency kusuka kwiklayenti. Yintengo iklayenti elizocashunwa lapho lifuna ukuthengisa (shoda ngamafuphi) isikhundla.
- Buza intengo
Yintengo lapho lwemali, noma ithuluzi kunikelwa khona ngokuthengiswa yi-FXCC (noma elinye iqembu eliphikisayo). Intengo ebuzwayo noma enikezayo iyentengo efanele intengo iklayenti elizocashunwa lapho ifuna ukuthenga (hamba isikhathi eside) isikhundla ..
- Isilinganiso semali
Izimali zihlala zithengiswa ngababili, isb, i-EUR / i-USD. Uhlobo lwemali lokuqala luhlobo lwemali eyisisekelo, kanti okwesibili yimali yesilinganiso. Lokhu kukhombisa ukuthi yimalini yemali yesilinganiso edingekayo ukuze uthenge isisekelo semali.
Umehluko phakathi kwentengo yebhidi nentengo ubizwa ukusabalala.
Inqubo yokuhlola amashadi wamanje ukuqagela ukuthi imakethe izohamba kanjani ngokulandelayo.
- Ikhomishini / imali ekhokhwayo
Yimali ekhokhwa umthengisi onjengeFXCC ngokuhweba ngakunye.
- Ukuhleleka kweMakethe
I-oda lemakethe lisuselwa kunani lamanje elibekwe yimakethe. Uma unikeza i-oda enjalo yokuthenga noma yokuthengisa, uzokwazi ukufinyelela kwezohwebo ngokushesha okukhulu.
- Limit oda
I-oda elilinganiselwe linika amandla umhwebi ukusetha umkhawulo wamanani kuze kufike kuwo currency ngazimbili ziyathengwa noma ziyathengiswa. Lokhu kuvumela ukuhlela ukuhweba ngamanani entengo athile futhi kugweme amanani entengo abiza ngokweqile noma ukuthengisa amanani ashibhile kakhulu.
- I-oda lokuyeka ukulahleka
Ngomyalo wokulahleka kokuyeka, umhwebi angakunciphisa ukulahleka kokuhweba uma intengo ihambela eceleni. I-oda lenziwa lisebenze lapho inani lentengo yemali lifinyelela izinga elithile lentengo. Umhwebi angabeka ukulahleka kokumisa ngenkathi evula ukuhweba noma kungabekwa ngisho nangemva kokuvula ukuhweba. Umyalo wokulahleka kokulahleka ungenye yamathuluzi ayisisekelo ukuphatha ubungozi.
Isilinganiso sivumela abathengisi ukuthi bathengise amanani amakhulu kunalokho okuvunwa yinhlokodolobha. Inzuzo engaba khona iphindaphindeka, kepha izingozi ziyakhula kakhulu.
Ngenkathi ukuhweba i-forex, abathengisi badingeka kuphela ingxenye encane yemali enkulu ukuvula nokugcina isikhundla sokuhweba. Le ngxenye yenhlokodolobha ibizwa ngokuthi umugqa.
PIP iyunithi eyisisekelo ekuhwebeni kwangaphambili. Kubonisa ushintsho entengo yamabhangqa emali. Ipayipi lihambisana nokushintsha kwesifundo okungu-0.0001.
Okuningi kusho amayunithi ayi-100,000 wemali eyisisekelo ekuthengiseni kwe-forex. Abathengisi banamuhla banikela ngamaqashiso amancane ngamayunithi ayi-10,000 nezinkatho ezincane ezinamayunithi ayinkulungwane kubahwebi abanemali ephansi.
- Amabili angaphandle
Amabhuzu angavamile awathengiswa kaningi njengama-"majors". Esikhundleni salokho, yizimali ezibuthakathaka, kepha zingahlanganiswa ne-EUR, USD, noma i-JPY. Ngenxa yezinhlelo zezezimali ezingazinzile, amaphara anjalo wemali ezivamile avame ukuba ntofontofo kakhulu kunama-majors azinzile kakhulu.
Ivolumu inani eliphelele lomsebenzi wokuhweba wohlobo oluthile lwemali. Kwesinye isikhathi kubhekwa futhi njengenani eliphelele lezinkontileka ezithengiswa phakathi nosuku ..
- Hamba isikhathi eside
"Ukuhamba isikhathi eside" kusho ukuthenga ibhendi yemali ngokulindela ukwenyuka kwentengo yalolo hlobo lwemali. I-oda iba yinzuzo lapho intengo ikhuphuka ngenhla kwentengo yokungena.
Ukubhangqa i-pair pair lwemali kusho ukuthi ulindele ukuthi inani lentengo yemali lizokwehla. I-oda iba yinzuzo lapho intengo iwela ngaphansi kwentengo yokungena.
- Awekho ama-akhawunti ashintshanayo
Ngaphandle kwe-akhawunti eshintshwayo, umthengisi akakhokhisi imali yokuqola ngokubamba noma yisiphi isikhundla sokuhweba ubusuku bonke.
- I-akhawunti ejwayelekile
Abathengisi be-inthanethi be-inthanethi manje banikeza zonke izinhlobo zama-akhawunti. Uma ungenazo izidingo noma izifiso ezikhethekile, gcina i-akhawunti ejwayelekile.
- I-akhawunti encane
I-akhawunti mini ivumela abathengisi be- forex ukuthi bathengise ama-mini-lots.
I-akhawunti encane ivumela abathengisi be forex ukuhweba ngama-micro-lots.
- Ukuhweba ngezibuko
Ukuhweba nge-Mirror kuvumela abathengisi ukuthi bakwazi ukukopisha ngokuzenzakalelayo ukuhweba kwabanye abathengisi abaphumelelayo ngokumelene nemali ethile.
Umehluko phakathi kwentengo yangempela yokugcwaliswa nentengo yokugcwalisa elindelekile ibizwa ngokuthi i-slippage. I-slippage ivame ukwenzeka lapho imakethe iguquguquka kakhulu.
Scalping isitayela sokuhweba esifushane. Isikhathi phakathi kokuvulwa nokuvalwa kokuhweba singahluka kusuka kumasekhondi ambalwa kuye kumaminithi ambalwa.
3. Vula i-akhawunti yedemo
Sincoma a i-akhawunti yedemo ongazama ngayo ukuhweba kwangaphambili ngaphandle kwengozi. Ngakho-ke, ungathola isipiliyoni sakho sokuqala se-FX ngaphandle kwengozi.
I-akhawunti yedemo isebenza njengefayela le- i-akhawunti yangempela ngokusebenza okulinganiselwe. Lapha unemali ebonakalayo ongayisebenzisela ukuhweba.
4. Khetha isoftware yokuhweba
Abanye abathengi banikezela ngengosi yabo ekhethekile yokuhweba yewebhu ngenkathi abanye abapheki beFX ukukunikeza isoftware ethile noma uhlelo lokusebenza. Abathengi abaningi basekela abadumile MetaTrader iphepha lokuhweba.
Uma usebenzisa i-inthanethi ngesiphequluli esingajwayelekile, kufanele ucabange ukuthi i-FX broker yakho ayiyisekeli. Ukuze ukwazi ukuhweba ngomthengisi we-Forex, kuzodingeka usebenzise uhlelo lokusebenza kulokhu - noma ufake esinye seziphequluli ezivamile kwikhompyutha yakho.
5. Khetha imali
Ukuhweba kwe Forex kwenziwa currency ngazimbili kuphela. Ngakho-ke, kufanele unqume ukuthi yiluphi uhlobo lwemali ozolifaka kuwo. Njengomthetho, ama-majors kanye nabancane bayatholakala. Ama-pairs aziwa kakhulu kakhulu cishe EURUSD, USDJPY, Futhi EURGBP.
6. Zama amanye amasu okuhweba
Isu elihambisanayo le-forex lifaka amaphuzu amane:
Izimpawu zokungena ezichaziwe
Khetha isu lokuhweba elikulungela kangcono.
Nazi ezinye ezejwayelekile amasu ukuhweba:
Ekubizwa nge- "scalping," izikhundla zigijimisa isikhathi esifushane kakhulu. Njengomthetho, bavala ukuhweba kungakapheli imizuzu embalwa yokuvula kwabo. Abahwebi baneliswa yimali ephansi ngokuhweba ngakunye lapho befaka izikali. Ukuphindaphinda njalo kungaholela ekubuyiseni okuphezulu esikhathini eside.
- Day ukuhweba
In uhwebo, ukuhweba kuvulwa futhi kuvalwe kungakapheli usuku olulodwa. Umthengisi wosuku uzama ukuzuza ekushintshashintsheni kwesikhashana esifushane emakethe ye-forex eguquguqukayo kakhulu.
- Ukuhweba kwe-Swing
Ukuhweba nge-swing kuyindlela yokuhweba yesikhathi esiphakathi lapho abathengisi babamba izikhundla zabo kusuka ezinsukwini ezimbili kuya kumaviki ambalwa futhi bazama ukuthola inzuzo ephezulu kumkhuba.
- Isikhundla Ukuhweba
Ekuhwebeni kwesikhundla, abathengisi balandela izinkambiso zesikhathi eside ukubona amandla aphezulu kusuka ekuqhubekeni kwentengo.
Ama-Forex Ukubuzwa Kwemibuzo
Ngabe kufanelekile ukutshala imali kwi-Forex?
Njenganoma iyiphi inzuzo, kuhlala kukhona ubungozi bokulahleka lapho uhweba i-Forex. Kufanele uhlele isu elifanele lokuhweba i-forex elihambelana nobuntu bakho bokuhweba. Labo abatshala imali ngokuhlakanipha bangathola inzuzo ephezulu kusuka ekuhwebeni kwe-forex.
Yiliphi ipulatifomu engcono kakhulu yokuhweba kwe-forex?
Ukukhethwa kwesikhulumi kuncike kakhulu futhi kuya ngezidingo zomuntu zokuhweba. Okunye okwaziwayo Amapulatifomu okuhweba nge Forex Faka MetaTrader 4 neMetaTrader 5. Akuwona wonke amapulatifomu wokuhweba akhululekile nokho. Ngaphandle kwemali ekhokhwa njalo ngenyanga, amanye amapulatifomu angahle asabalale futhi.
Kunzima kangakanani ukuphumelela ekuhwebeni i-forex?
Akungatshazwa ukuthi kuthatha umkhuba omningi ukwenza imali ngokuhweba kwe-forex. Ngaphezu kokukhetha i-jozi elifanele lemali, ukuqeqeshwa njalo kubalulekile ukuze ube ngumhwebi ophumelelayo we-forex.
Ukuhweba okuku-inthanethi kwe-inthanethi kuthembisa ukubuyisa okuphezulu kubatshalizimali kodwa kufuna okuningi kubo. Yilabo kuphela abalungele ukulungiselela ukuhweba online okuyi-inthanethi kahle futhi babhekane kakhulu namasu okuhweba i-forex okufanele bangene emakethe ye-forex.
Ngamathiphu okuxoxwe ngawo ngenhla, ulungele kahle ukuba nesipiliyoni sakho sokuqala se-forex futhi ekugcineni ungaqala ukufunda ukuhweba kwe-forex.